ပြည်တွင်းတွင် ရောင်းချရန် လပ်ဆက် အာအိတ်ခ်ျ ၅၇၀ များ | လပ်ဆက် အာအိတ်ခ်ျ ၅၇၀ ကားဈေးများ Carmudi Myanmar [Burma]
Black Lexus LX 570 2016 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start. ဘေးကင်...
Pearl white Lexus LX 570 2018 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start. ...
Lexus LX 570 2016 (Pre-Order)
Grey Lexus LX 570 2016 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,Original TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start...
Pearl white Lexus LX 570 2013 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start. ...
Black Lexus LX 570 2013 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start. ဘေးကင်...
Lks 2,250 ညှိနှိုင်း
Grey Lexus LX 570 2012 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,Original TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start. ဘေးကင်းလ...
လပ်ဆပ် အယ်လ်အိတ်ခ်ျ (၅၇၀)
တိုယိုတာ ရဲ့ အခွဲတစ်ခု ဖြစ်တဲ့ လပ်ဆပ် ဇိမ်ခံကားများကို ပြည်တွင်းမှာ တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ လန်ခရိုဇာနဲ့ ဆင်တူပြီး ဇိမ်ခံကားလိုင်းဖက်ကို အဓိက ဦးစားပေးထားတဲ့ လပ်ဆပ်ကားတွေဟာ ဈေးနှုန်းအား ဖြင့် မြင့်မားကြပါတယ်။ မှာယူမူအနေနဲ့ ဥရောပကနေ တိုက်ရိုက် မှာယူမူတွေ ရှိသကဲ့သို့ ပြည်တွင်း ရိူးရွန်တွေကနေ ရောက်ရှိပြီးသားအနေနဲ့ ဆက်သွယ် ၀ယ်ယူနိင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အစိတ်အပိုင်းတွေကို အပြည့်အစုံ တပ်ဆင်ထားပြီး နည်းပညာ မြင့်မားမူကြောင့် စရိတ်စက မြင့်မားတာကို တွေ့ရပါတယ်။ အင်ဂျင်ကလည်း ကြီးပါတယ်။ လပ်ဆပ် အယ်လ်အိတ်ခ်ျ (၅၇၀) ဆိုတာ အင်ဂျင် ၅၇၀၀ စီစီ ရှိတဲ့ ကားတွေကို ခေါ်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဇိုင်း ထူးခြားမူအနေနဲ့ လန်ခရုဇာကို အခြေခံထားပေမဲ့ ဌင်းထက် ပိုပြီး ဒီဇိုင်းပိုင်းကို ဆန်းသစ်ထားပြီး ကား အကျယ်နဲ့ ပုံစံတွေကို တိုးမြင့်လို့ ထားပါတယ်။ မော်ဒယ်တွေ အနေနဲ့ လပ်ဆပ် အယ်လ်အိတ်ခ်ျလိုင်း မှာ မော်ဒယ် (၃) မျိုးရှိပါတယ်။ အကုန်လုံးသော မော်ဒယ်တွေဟာ လန်ခရုဇာထဲမှာ အခြေခံထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အယ်လ် အိတ်ခ်ျ ၄၅၀၊ အယ်လ်အိတ်ခ်ျ ၄၇၀ နဲ့နောက်ဆုံး မော်ဒယ်ဖြစ်တဲ့ အယ်လ်အိတ်ခ်ျ ၅၇၀ တို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ၄၇၀ မော်ဒယ်ကိုတော့ ဌင်းတို့ရဲ့ အောင်မြင်မူ မော်ဒယ် အနေနဲ့ ဆက်လက် ထုတ်ခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး ၄၅၀ ကတော့ အရင် ဦးဆုံး လပ်ဆပ်ရဲ့ SUV ဈေးကွက်ထဲကို ၀င်ရောက် ထိုးဖောက်ခဲ့တဲ့ မော်ဒယ် ဖြစ်ပါတယ်။
အင်ဂျင် ၅၇၀၀ စီစီ ရှိပြီး ဓာတ်ဆီ အင်ဂျင်သုံးကားတွေ ဖြစ်ပြီး အော်တို ဂီယာ ၆ ချက်ပါရှိပါတယ်။ တံခါး (၄) ပေါက်ကားတွေ ဖြစ်ပြီး အရှေ့အင်ဂျင်၊ လေးဘီးယက် စနစ်တွေ ဖြစ်ပါတယ်။ တတိယမျိုးဆက် ဖြစ်တဲ့ လပ်ဆပ် အယ်လ် အိတ်ခ်ျ (J200) ကို ၂၀၀၇ ကနေ ယနေ့ခုနှစ်ထုတ်တွေ အထိ အရှေ့ မျက်နှာပြင်ကို ပြောင်းလဲထားတာကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပြီး အင်ဂျင်ကတော့ ၅၇၀၀ စီစီ ၊ ၄၇၀၀ စီစီ၊ ၄၆၀၀ စီစီ တို့မှာ တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အော်တို ဂီယာ (၆) ချက် ၊ ဓာတ်ဆီကားတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဇိုင်း အနေနဲ့ ကားမှာ လေးလက်မ အနောက်ကို ပိုရှည်ပါတယ်။ အကျယ်မှာ ၁ လက်မလောက်ပိုပြီး ကျယ်လာတာကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ လပ်ဆပ် အယ်လ်အိတ်ခ်ျ (၅၇၀) က ၂၀ လက်မ ရှိဘီးတွေ ရှိပြီး လေးဘီးလုံးမှာ လျှပ်စစ် ဟိုက်ဒရောလစ် စပရင် စနစ်တွေကို သုံးထားပါတယ်။ အတွင်းခန်းအနေနဲ့ ကရိယာ တန်ဆာပလာ တော်တော်များများ စုံလင်ပါရှိပါတယ်။ စပီကာ ၁၉ လုံး ၊ ဟတ်ဒရိုက် တွေကအစ ပါရှိပါတယ်။ ကားထိုင်ခုံတွေကို အနောက်ဆွဲတာက အစ ပါဝါ ဆလိုက်တွေနဲ့ ဖြစ်ပါတယ်။ တီဗီတွေက အရှေ့မှာတင် မဟုတ်ပါဘူး။ အနောက်ထိုင်ခုံတွေမှာ ပါ ပါဝင်လာပါတယ်။ ဘယ်မောင်းကားတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဂျပန်မှာ လပ်ဆပ်မော်ဒယ်တွေကို မရနိင်လို့် ဖြစ်ပါတယ်။
၂၀၁၄ လပ်ဆပ်စ် အယ်အိတ်ခ်ျ ၅၇၀ အနေနဲ့ ထိုင်ခုံ (၃) တန်းပြုလုပ်ပေးထားပြီး ခရီးသည် ၈ ယောက် ပါဝင်စီးနင်းနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒုတိယထိုင်ခုံက ခေါက်ချိုးနိုင်ပြီး အရှေ့ကို လှန်နိုင်ပါတယ်။ တတိယခုံ တန်းကတော့ အရှေ့ကို ခေါက်လို့မရပါဘူး.ဘေးဖက်ကိုတော့ ခေါက်လို့ရပါတယ်။ကား အတွင်းပိုင်းရဲ့ နေရာ လေးခုမှာ ရာသီဥတု ထိန်းချုပ်မှုတွေ ပါရှိပါတယ်။ လပ်ဆပ် အယ်အိတ်ခ်ျ ၅၇၀ ၂၀၁၄ မောဒယ်ရဲ့ အပြင်ဖက် ရုပ်ထွက်အနေနဲ့ အရင် အက်စ်ယူဗီ မြင်ကွင်းတစ်ခုကို ထိန်းသိမ်းထားတာကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ တိုယိုတာ လန်ခရုဇာနဲ့ ဆင်တာကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ လမ်းမရွေးတဲ့ ခန့်ညားတဲ့ အက်စ်ယူဗီကြီးတွေ အဖြစ်တွေ့ရမှာပါ။ အနောက်ပိုင်း ဘန်ဘားမှာလည်း စတီး ဖက်ကို အလေးပေးထားမှု အနေနဲ့ တောက်ပစွာဖြင့်တွေ့မြင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အင်ဂျင် က ၅၀၀၀ စီစီကျော်ဖြစ်လို့ ဆီစားကတော့ များမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သို့ပေမဲ့ အင်ဂျင်ကြီးသလို ရုန်းအားကောင်းမွန်ပြီး လမ်းမရွေးသွားနိုင်တဲ့ ယာဉ်တွေ ဖြစ်ပါတယ်။ လူ စီး ၈ ယောက် စီးနိင်ပါတယ်။ဒီဇိုင်း လှပပြီး အက်စ်ယူဗီ အမြင့်ပိုင်းကားတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ နည်းပညာအရည်အသွေးကို အပြည့်အ၀ သုံးစွဲထားတဲ့ ဇိမ်ခံ လပ်ဆပ်ကားများ ဖြစ်ပါတယ်။
ဘရန် နယူး လပ်ဆပ် အယ်လ်အိတ်ခ်ျ တစ်စီးကို သိန်း ရှစ်ရာလောက် ရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။အခွန်နဲ့အခြား သယ်ဆောင်ခတွေ မပါသေးပါဘူး။ ပြည်တွင်းမှာတော့ တစ်ပတ်ရစ်ကို ခုနှစ် အမျိုးအစားအလိုက် သိန်း တစ်ထောင်ကနေ သိန်း နှစ်ထောင် ကျော်လောက် ရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပြည်တွင်းမှာတော့ ၂၀၀၈ ၊ ၂၀၁၀၊ ၂၀၁၂ ၊ ၂၀၁၃ စတဲ့ ခုနှစ်တွေမှာ ရှိတဲ့ တစ်ပတ်ရစ် ကားတွေကိုတွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ပတ်ရစ်တွေ ဆိုပေမဲ့ အသစ်နီးနီးပါပဲ။ မိုင်လစ်တွေ ကတော့ ၁သောင်းခွဲနဲ့ ၂ သောင်းနီးပါးလောက် ရှိတာကို တွေ့ရပါတယ်။ အမည်း၊ ပုလဲ စတဲ့ အရောင် အသွေး များကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပါဝါ ပတ်ရှ် စတပ်တွေနဲ့ တီဗီ၊ အနောက် ကင်မရာတွေ ပါရှိပါတယ်။
ထိပ်ဆုံး Lexus မော်ဒယ်